Yahuuda Oo Markale Duqeysay Magaalada Gaza. – Calamada.com
Yahuuda Oo Markale Duqeysay Magaalada Gaza.
calamada August 9, 2018 3 min read
Wararka ka imaanayo dhulka Falistiin ayaa sheegaya in dhaqdhaqaaq ciidan oo xoog leh laga dareemayo magaalada Gaza iyo dhulka ku xeeran, kadib markii xalay duqeymo culus ay halkaas isku weydaarsadeen kooxaha muqaawamada iyo ciidanka militaryga maamulka Yuhuuda.
Xaalad kacsanan ah ayaa kajirto magaalada Gaza, kooxaha muqaawamadana waxa ay u diyaar garoobayaan dagaal xoogan oo ay kala hortagaan yuhuuda xooga kuheysato qeyba kamid ah dhulka filistiin.
Habeenki xalay ahaa ayay duqeymo ka dheceen magaalada Gaza kuwaas oo ay geysanayaan diyaaradaha dagaalka Yuhuuda iyo ciidankooda ku sugan xad beenaadka kala qeybiyo Gaza iyo dhulka gumeysiga ku hoos jira.
Duqeymaha Yuhuuda ayaa lagusoo waramayaa inay ku geeriyoodeen ilaa 3 qof oo filistiiniyiin ah oo ay kujirto Hooyo leh Uur 9 bil ah iyo gabar ay dhashay oo 1 sano iyo bar jirta, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 12 qof oo kale, sida ay sheegtay wazaarada caafimaadka maamulka filistiin.
Kooxaha muqawamada oo duqeymahaas ka jawaabaya ayaa iyana dhankooda bilaabay duqeymo saf balaaran ah oo ay la beegsanayaan mandiqadaha lagu deegaameeyey dadka yuhuuda ah ee ku dhow xuduud beenaadka magaalada Gaza, waxa ayna beegsadeen ku dhawaad 10 magaalo oo yuhuudu dagan yihiin iyo saldhig ciidan oo ku yaala magaalada Sidiiroot.
Warbaahinta ayaa xaqiijiyay in duqeymaha ay geysteen kooxaha muqaawamada filistiiniyiinta ay sababeen khasaare kala duwan oo soo gaaray dadka yuhuuda ah, ayna ku dhaawacmeen ilaa 12 qof yuhuud ah.
Mandiqadaha ay duqeeyeen kooxaha muqaawamada waxaa kamid ah magaalada Nitifot, Sidiroot, Yadmir Dakhay, Naaxil Cowz, Suufa iyo Neyziim, waxaana lagusoo waramayaa inuu jiro burbur xoogan oo soo gaaray guryo ay dadka yuhuuda ah deganaayeen iyo gaadiid ay dadkaas la haayeen.
Qalabka loo yaqaan Patriot ee loo isticmaalo ka hor taga gantaalada ayaa mar kale ku hor kufay wax ka qabashada gantaalada ay kooxaha muqaawamada ku garaacayaan magaalooyinka lagu deegaameeyey dadka yuhuuda, xalay oo kaliyana waxaa ka baxsaday wax ka badan 125 gantaal sida ay warbaahinadu sheegayaan.
Xeeladaha ay isticmaalayaan kooxaha muqaawamada ayaa la sheegayaa inay kamid tahay in markiiba ay ridayaan wax ka badan 20 gantaal oo isku mar ah, taas oo shaqada ku adkeyneysa qalabka Patriot oo aan awood u lahayn inuu howsha intaa la eg mar qura wada qabto.
Maamulka Sahayuuniyada ayaa fariin u diray dadka Yuhuuda, taas oo loogu sheegay inaysan ka fogaan godadka loo sameeyey inay ka galaan gantaalada Muqaawamada, waxa uuna ugu baaqay in qof kastaa uu heysto 25 second oo kaliya mar hadii uu maqlo dhawaqa qalabka digniinta bixiya ee ku rakiban magaalooyinka ay xooga ku heystaan.
Duqeymaha ay is weydaarsanayaan labada dhinac waxaa bar bar socda kulamo siyaasadeed iyo diyaar garow ciidan oo balaaran, waxaana laga cabsi qabaa in dagaalku uu si tartiib tartib ah uu usii balaarto.
Ra iisal wazaaraha Yuhuuda Binyamin Natanyaho ayaa kulan degdeg ah isugu yeeray gudiga amniga maamulkiisa, kaas oo lagu falanqeynayay dhacdooyinki u danbeeyey ee mandiqada ka dhacay, inkastoo aan la faahfaahin waxa kasoo baxay kulankii ay wada qaateen.
Dhanka kale Xarakada Xamaas ayaa iyana war ay soo saartay ku sheegtay in la gaaray waqtigii ay u aar gudi lahaayeen dadki Falastiiniyiinta ahaa ee dhiigooda sida gar darada ah loogu daadiyey magaalada Gaza iyo deeganada ku xeeran, lana joogo xiligii ay muqaawamada ka aargoosan lahayd cadowga Sahayuuniyada ah.
Dhaqdhaqaaqan ciidan iyo diyaar garowga xoogan ayaa imaanaya Maalin kadib markii Militaryga yuhuuda ay duqeyn ku dileen, laba dagaal yahan oo katirsanaa guutada Cizu diin Alqasaam ee kadagaalanta dhulka filistiin, dagaal yahanadaas oo la dilay xilli ay ku tababaranayeen mid kamid ah xeryahooda ku yaala galbeedka Magaalada Gaza.
Previous: Halkan Ka Dhageyso Warka Duhurnimo 27-11-1439 Hijri.
Next: Halkan Ka Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm 27-11-1439 Hijri.